Inkcazo kunye Nenkcazo kwi-Circle ne-Pie Graphs
Iinkcukacha zobuninzi kunye nedatha zingabonakaliswa ngeendlela ezahlukeneyo ezibandakanya, kodwa azikhawulelwanga, iitshathi, iitafile, iziqendu kunye negrafu. Iisethi zeenkcukacha zifundwa ngokulula okanye ziqondwe xa ziboniswa kwifomati efanelekileyo yomsebenzisi.
Kwidrafti yesangqa (okanye ityati yetaji), inxalenye nganye yedatha imelwe yecandelo lesangqa. Ngaphambi kweenkqubo zeteknoloji kunye neepredishithi, umntu uya kufuna ubuchule kunye neepesenti . Nangona kunjalo, ngokuphindaphindiweyo kuninzi, idatha ifakwe kwiikholam kwaye iguqulelwe kwisiqulathi sesangqa okanye ipati yeepeyi usebenzisa ispredishithi okanye i-graphing calculator.
Kwingxowa yepayili okanye isangqa lesigrafu, ubungakanani becandelo ngalinye liza kuba lilingana nexabiso langempela le data elimele njengoko liboniswe kwimifanekiso. Ipesenti zebonke isampuli zivame ukuba zimele kumacandelo. Enye yezinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa iibrafu zembindulu okanye iitshati zeepeyi ziphumo ze-poll kunye nophando.
Umzobo wePaint of Colors Favorite
Imibala Eyintandokazi. D. Russell
Kwimagrafu yombala oyintandokazi, abafundi abangama-32 banikezwa ithuba lokukhetha kusuka ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza, olunxwemeni okanye enye. Ukuba uyazi ukuba ezi mpendulo zilandelayo zi-12, 8, 5, 4 kunye no-3. Kufuneka ukwazi ukukhetha icandelo elikhulu kwaye wazi ukuba limelela abafundi aba-12 abakhethile obomvu. Xa ubala ipesenteji, ngokukhawuleza uza kufumana ukuba ngabafundi abangama-32 abahlolisisiweyo, 37.5% abakhethiweyo abomvu. Unolwazi olwaneleyo lokufumanisa ipesenti yemibala esele.
Isatidi yepayiti ikuxelela ngokukhangela ngaphandle kokuba ufunde idatha ekhangeleka ngathi:
Olubomvu 12 37.5%
Blue 8 25.0%
Oluhlaza 4 12.5%
Orange 5 15.6%
Okunye 3 9.4%
Kwiphepha elilandelayo yimiphumo yolu vavanyo lwezithuthi, idata linikezelwa kwaye kufuneka uqinisekise ukuba isiphi isithuthi esifana nombala kwiiteyiti zeepeyi / isangqa segrafu.
Iziphumo zoPhando lweeMoto kwiPiy / Circle Graph
Iimoto ezingama-53 zahamba ngezitrato ngaphakathi kwithuba lemizuzu engama-20 uphando lwenziwe. Ngokusekelwe kumanani alandelayo, ngaba unokukhetha ukuba imbala imele isithuthi? Kwakukho imoto engama-24, iilori ezi-13, ii-SUV ezi-7, izithuthuthu ezi-3 kunye nee-vans ezi-6.
Khumbula ukuba icandelo elikhulu liza kubonisa inani elikhulu kunye necandelo elincinci liza kubonisa inani elincinci. Ngenxa yeso sizathu, uphando kunye neempopu zihlala zifakwa kwiigrafu / iibrafu zengqungquthela njengoko umfanekiso unelungelo lamagama ayi-1000 kwaye kulo mzekelo, uxelela ibali ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Unokuba unqwenela ukuprinta ezinye iigrafu kunye neetshathi zokusebenzela kwiphepha kwi-PDF ukuze wenze uqeqesho olongezelelweyo.
Izifundo Eziphambili Zokuxela Ixesha
Sasaza uMyalezo woLuthando ngoLwesihlanu oMnandi
IYunivesithi yaseCalifornia Santa Barbara Photo Tour
Ngaba "Iintsuku Ezilishumi elinesibini zeKrismesi" Zinentsingiselo Efihliweyo?
Yazi Ezi 91 IziSayensi eziBaziwayo eziBaziwayo
Abantu Benza Njani Ukutshintsha Kwemozulu Yehlabathi?
Uluhlu olupheleleyo lweeLwimi eziLungileyo zeeNkalo zee-2000s
Urhulumente weRiphabhlikhi yaseRoman
Iintlanzi zezilwanyana: Iindwendwe njengeTotems
Umsi weBhomu Umlilo womlilo
Iipateni ezisetyenziselwa njani ubugcisa?
Imiboniso yokuFunda: Iiprogram ze-TV ezi-8 ezifundisa izakhono zokuFunda nokuBhala
Iyini Imvelaphi yekota 'uDormie'?
Indlela yokudada iPopu - Iingcebiso zePhuphiswano kwi-Top Coaching